အစ်ကိုရေ မိသားစုနဲ့ အတူ ထပ်တူထပ်မျှ ၀မ်းနည်း ကြေကွဲ ပါတယ် ခင်ဗျာ၊ ဦးလေး ကောင်းရာ သုဂတိ လားပါစေ ... 12 Oct 08 14:53
ပြတိုက်ရေ ..တကယ့်ကို ထပ်တူထပ်မျှ ၀မ်းနည်းကြေကွဲရပါတယ်..နင်လဲ ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်နော် .. 12 Oct 08 14:36
မိသားစုနဲ့ထပ်တူ ၀မ်းနည်းကြေကွဲမိပါတယ် 12 Oct 08 12:16
ကြားကြားချင်းလာခဲ့တာပဲ။ ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေဗျာ။ ထပ်တူထပ်မျှဝမ်းနည်းကြေကွဲရပါတယ် 12 Oct 08 10:17
အစစအရာရာ အဆင်ပြေချောမွေ့ အေးချမ်းပါစေ။ ဘ၀ဆိုတာ တွေ့ဆုံကြုံကွဲပါပဲ။ 12 Oct 08 09:44
အကို့ဖခင် ကောင်းရာသုဂတီလားပါစေ။ ကျန်ရစ်သူမိသားစု လည်း အစစအရာရာ အဆင်ပြေချောမွေ့ အေးချမ်းပါစေ 12 Oct 08 04:37
ပြတိုက်ရှင်ရေ တကယ့်ကို စိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာ။ အကိုတို့မိသားစုနဲ့ အတူ ထပ်တူထပ်မျှ ကြေကွဲရပါတယ်ဗျာ။ 12 Oct 08 04:36
ကျန်ရစ်သူမိသားစု ငြိမ်းချမ်းပါစေ။ အစစအရာရာ အဆင်ပြေပါစေနော်။ 12 Oct 08 04:25
ဦးလေးဂျီး ဖခင် ကွယ်လွန်ကြောင်း သိရလို့ ထပ်တူထပ်မျှ ဝမ်းနည်းကြေကွဲရပါတယ်။ ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေ။ 12 Oct 08 04:25
LA မှာနေတာပါလား။ တမြို့တည်းသားပေါ့။ ခုမှ ပထမဆုံး ရောက်ဖူးတာပါ။ အမ ကူလုပ်ပေးနိုင်တာလဲ ပြောပါနော်။ 12 Oct 08 04:11
ကောင်းရာသုဂတိလားဖို့ ဆုတောင်းပါတယ်။ မKOM ပြောလို့ လာခဲ့တာပါ။ 12 Oct 08 04:04
ကျန်သေးမဲ့ အမေနဲ့ မောင်နှမတွေကို ဂရုစိုက်ရင်း လွမ်းစိတ်ဖြေပါနော်။ 12 Oct 08 04:03
မငိုပါနှဲု။ တို.တွေလည်း ငိုမိလိမ်.မယ်။ 12 Oct 08 04:02
မနှစ်က ဒီအချိန်မှာပဲ အမတို့ ပါပါး (အမအမျိုးသား အဖေ) ဆုံးသွားတာပါ။ ၁နှစ်ရှိပြီပေါ့။ 12 Oct 08 04:02
ကျန်ရစ်သူမိသားစု ငြိမ်းချမ်းပါစေ 12 Oct 08 04:02
စိတ်မကောင်းလို့ သတင်းလာမေးပါတယ် ကို heart ရေ။ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်အပြည့်နဲ့ အားပေးသွားပါတယ်။ 12 Oct 08 04:01
စိတ်မကောင်းဘူး ကိုဟတ်.. 12 Oct 08 03:53
စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေ အမြန်ဆုံး ပျောက်ပျက်နိုင်ပါစေရှင်။ အကို့အဖေ ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေ။ 12 Oct 08 03:25
Heart Gyi yae.. စိတ်မကောင်းဘူး။ ငြိမ်သက်ခြင်းဆုကျေးဇူးတွေပါစေ...။ 12 Oct 08 03:15
ကိုပြတိုက်ရေ မိသားစုနဲ့ထပ်တူ ၀မ်းနည်းကြေကွဲမိပါတယ် 12 Oct 08 02:50
ကိုပြတိုက်ကြီး မိသားစု နဲ့ အတူ ထပ်တူထပ်မျှ ၀မ်းနည်းကြေကွဲရပါတယ်ဗျာ ၊၊ ငြိမ်းချမ်းပါစေ ၊၊ 12 Oct 08 02:43
မင်္ဂလာပါ ကိုဟ။ ဘယ်ရယ်မှ မဟုတ်ဘူး၊ သတိရလိုက်တိုင်း ရောက်ရောက်နေလို့ .. လာနေတယ်။ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ. 12 Oct 08 02:09
သူငယ်ချင်းနဲ့ ထပ်တူ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်... 12 Oct 08 01:56
ခင်မင်ရတဲ့ ကိုအညတရရဲ့ ဖခင် ကွယ်လွန်ကြောင်း သိရလို့ ထပ်တူထပ်မျှ ဝမ်းနည်းကြေကွဲရပါသည်။ 12 Oct 08 01:52
ကိုယ်တို့ရဲ့သူငယ်ချင်း heart museum ရဲ့ အဖေ အောက်တိုဘာ ၁၁ တွင်ကွယ်လွန်သွားရွေ. စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါကြေ 12 Oct 08 01:02
http://heartmuseum.blogspot.com/ ကိုယ်တို့ရဲ့သူငယ်ချင်း 12 Oct 08 01:02
ကိုဟ ပါပါ--ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေ---- 12 Oct 08 01:00
အရမ်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ် 12 Oct 08 00:42
ဘာဖြစ်ဖြစ် ပါပါကြိးကို ကျွန်နော် ပြုတဲ့ ကုသိုလ်တခုကို မျှဝေပေးလိုက်တယ်။ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ... 12 Oct 08 00:33
စက်တင်ဘာ ၂၄ မှာကွန်မက်ထားခဲ့ပါတယ်။ 12 Oct 08 00:32
လေသွားတာပေါ့။ အင်း..ကံ ကံ၏ အကျိုးပေါ့ဗျ ခင်ဗျား ကျွန်နော် အားလုံး ဆုံတွေ့မှာလေ 12 Oct 08 00:32
စိတ်ဆင်းရဲ မဲ့ အချိန် မှာတော. စိတ် ဆင်းရဲ ပါ။ တင်း မထားပါနှဲှု့ ငိုစရာရှိ ငိုပါ။ 12 Oct 08 00:31
မင်္ဂလာပါ ကိုဟ။ အခု ဘလောင်္ဂထဲရောက်ပြီး တန်းတန်းကြီးလာခဲ့တယ်။ ဟာ ဗျာ စိတ်မကောင်းဘူး။ 12 Oct 08 00:31
Posted by Heartmuseum at 4:23 AM
စိတ်ခံစားမှုတော့ ဖြစ်မယ်လေ။ ကြုံဖူးပါတယ်၊ ကိုယ်ချင်းလဲ စာမိတယ်။ သေသောသူ ကြာရင်မေ့ စကားပုံလဲ ရှိသေးတယ်လေ။ ရှေ့ဆက်ရမဲ့ အနာဂါတ်လဲ ရှိသေးတယ်။ စိတ်မကောင်းပါဘူး ထပ်တူထပ်မျှပါ။
ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်ပါ။ သတ္တ၀ါ အားလုံး ဆုံရမဲ့ သေခြင်း ဖြစ်တယ်။ ကိုယ်တယောက်ထဲ ဖြစ်တယ်ဆို ပုံစံဖြင့် မပူဆွေးပါနဲ့။ ကြာရင် အားလုံး ပုံမှန် ဖြစ်သွားမှာပါ။